Par Taratra sur 25/10/2019
Kick Boxing : Nigadona teto an-tanindrazana, ny alarobia lasa teo, ireo delegasiona malagasy, saika hiatrika ny fiadiana ny tompondaka eran-tany Wako, kick Boxing, tany Sarajevo, izay voasakana tao Egypta, ka voatery niverin-dalana. Araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra, hisy ny fanazavana hoentin’izy ireo, hilazana izay zava-nisy marina ka antony tsy nahalasa azy ireo, hotanterahina tsy ho ela, amin’ny fotoana maha mety azy.
Basikety –Amboara an’i Afrika: Efa fantatra ireo mpilalao efatra voasafidy hiatrika ny fiadiana ny amboara an’i Afrika, taranja basikety 3×3, izay ahitana an’i Elly, i Arnold, i John ary i Fabrice. Tsiahivina fa tamin’ny alalan’ny fitsapana no nahafahana nitsonga azy efatra mirahalahy ireto. Afaka tapa-bolana moa no hanatanterahana ny fifaninanana any Kampala Ouganda. Mbola tena ao anatin’ny fanomanana sy ny fanazaran-tena tanteraka ireto mandrafitra ny ekipa nasionaly ireto, ankehitriny.
Bodybulding : Nahemotra ho amin’ny 3 novambra izao ilay fifaninanana « Gasy body bulders championship amateur », misokatra ho an’izay tsy mbola nahazo anaram-boninahitra na nandrombaka ny laharana telo voalohany, izany hoe natokana ho an’ ireo bandikely sy hitsongana ireo atleta vao misandratra. Noho ny fisian’ny bakalorea andiany faharoa no antony. Tsy niova ny toerana fa eny amin’ny Sainte Famille Mahamasina ihany.